C/qaasim Salaad oo ku tilmaamay dagaalada ka socda Gobolka Gedo dagaal sokeeye - Jowhar Somali news Leader
Home News C/qaasim Salaad oo ku tilmaamay dagaalada ka socda Gobolka Gedo dagaal sokeeye
C/qaasim Salaad oo ku tilmaamay dagaalada ka socda Gobolka Gedo dagaal sokeeye
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya C/qaasim Salaad Xasan ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dagaalada ka socda gobolada dalka, isagoo ku baaqay in aan marnaba la qaadin dagaal iyo fidno.
Wareysi uu siiyay Idaacada Kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa Madaxweyne C/qaasim ku tilmaamay dagaalada ka socda gobolkada kuwo sokeeye oo dad Soomaali ay is dilayaan.
“Alle halaga baqo ummaddana ay is cafido oo la isku naxariisto, in aan marnaba dagaal iyo fidno la qaadin intaas oo sano ayaa fidno ku jirnay dalkeena ayaa ku baaba’ay dadkayaga ku baaba’ay dhaqaalaha iyo sharafta ayaa ku baaba’ay in laga baxo oo aan dalkeena nabad ku joogno oo aan Alle u soo noqono horayna waa u iri hadana waa leeyahay ayaa la rabaa”ayuu yiri Madaxweyne C/qaasim.
Mar wax laga weydiiyay dagaalka ka socda Gobolka Gedo ee u dhaxeeya Jubbaland iyo dowladda Federaalka ayaa sheegay in dagaalkaas uu yahay dagaal sokeeye oo ay is dilayaan dad Soomaali walaalo aan kala fogeyn
“Dagaalka ka socda gobolada badanaa waa sokeeye dad walaalo soomaali ah ayaa is dilaya, oo aan kala fogeyn, hadana Gedo waxaa uga rajeynayaa alle uga rajeynayaa dagaalkaas ka joogsado dadka meesha jooga haddii wax ka jiraan duqeydooda iyo culumaa’udiinka inay ka qaataan dagaalka in la joojiyaan oo aan dadka lagu leyn, horay ayaa u sheegay Alle waxa uu quraankiisa ku yiri qof ninkii dila oo xaq daro ku dila wuxuu la mid yahay adduunka dadka jooga oo dhan qof laayay ay la mid yahay, marka waxaa yeeleysaan aakhiro loo socdaa adduunka la joogi maayeen, alle halaga baqo halaga heshiiyo wixii dhibaato ah oo jira”ayuu yiri Madaxweynihii hore ee Soomaaliya C/qaasim Salaad Xasan oo degan magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa todobaadyadii u dambeeyay ciidamo fara badan ku daabuleysay Gobolka Gedo, si ay meesha uga saarto Maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyo Axmed Madoobe, waxaana horay ula wareegtay gacan ku heynta magaalooyinka Luuq, Doolow iyo Beledxaawo.
Todobaadkii hora dagaalo u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa ka dhacay magaalada Beledxaawo ee ku dhow xuduuda Kenya, waxaana dagaaladan ka dhashay dhimasho iyo dhaawac.